China 201 eshushu liqengqiwe ipleyiti steel ukwenziwa kunye mveliso | IHuaxiao
Ubungakanani beplate ye-stainless steel engama-201 enkulu kune-1.2mm, ukuba ine-asidi ethile kunye ne-alkali ukumelana, uxinizelelo oluphezulu njalo njalo, kukuveliswa kwamatyala ahlukeneyo, umtya wokhuseleko lwasemva lwezinto ezisemgangathweni. Ikakhulu esetyenziselwa umbhobho zokuhombisa, umbhobho mveliso, ezinye iimveliso umzobo nzulu.
Sino Stainless Capacity malunga 201 Kushushu liqengqiwe intsimbi engenasici ipleyiti, i-201 HRP, PMP
Ubunzima Pallet: I-1.0MT-6.0MT
201 Ibakala elinye ukusuka kumgangatho wokusila ohlukileyo
Icandelo leekhemikhali i-LISCO – L1:
C: ≤0.15, Si: ≤1.0 Mn: 8.0-10.5, Cr: 13.5～Ngo-16.00, uNi: 1.0～3.0, S: .00.03, P: .0.06 Cu: <2.0, N0.0
Ipropathi ye-201 yepropathi yeLISCO – L1:
Uqine:> 515 MPA
Udibaniso (%):> 35%
Umahluko phakathi kwe-201 (L1, J1) kunye ne-202 (L4, J4) ipleyiti yentsimbi engenasici kunye nekhoyili
I-201 kunye ne-202 insimbi engenazintsimbi zizinto ezimbini eziqhelekileyo eziqhelekileyo ezingenazintsimbi, ezizinto ezingama-200 zentsimbi engenasici, ke yintoni umahluko phakathi kwezi zinto zimbini? Ukongeza kwiileyibhile ezahlukeneyo zezinto ezibangelwe zizithako ezahlukeneyo, yintoni umahluko okhoyo kwizicelo ezithile kunye neempawu ezithile? Makhe siqwalasele ngakumbi namhlanje.
Kwimveliso yentsimbi engenasici, i-201 imele imathiriyeli. I-201 yentsimbi engenasici, ibhekisa kwigama eliqhelekileyo leentsimbi ezingama-201 kunye nentsimbi enganyangekiyo. I-201 insimbi engenasici ibhekisa kwinyithi enganyangekiyo ukubola ngumzimba obuthathaka obufana neatmosfera, umphunga kunye namanzi, ngelixa intsimbi enganyangekiyo iasidi ibhekisa kwisinyithi esinganyangekiyo kumhlwa ziarhente zekhemikhali ezifana neasidi, ialkali kunye netyuwa. Imodeli esemgangathweni kazwelonke yi-1Cr17Mn6Ni5N. I-manganese elemental (kunye ne-nitrogen) yeplati ye-stainless steel engama-201 ithatha indawo yazo okanye yonke i-nickel ukuvelisa umxholo we-nickel esezantsi ongafikeleli kulingano kunye neefomite zeferrite. Ke ngoko, umxholo we-ferrochrome kwi-200 uthotho lwentsimbi engenacici incitshisiwe yaya kwi-15% -16%, kwade kwehla nge-13% -14%, ke umhlwa wayo awunakuthelekiswa ne-304 kunye nezinye iintsimbi ezifanayo.
I-202 insimbi engenasici yenye yee-200 zensimbi ezingenasici, imodeli esemgangathweni yesizwe yi-1Cr18Mn8Ni5N. Amanqaku angama-200 entsimbi engenasici yintsimbi encinci ye-manganese yentsimbi enomxholo we-nickel kunye nomxholo we-manganese omalunga ne-8%. Yinto nickel-nickel steel stainless. 202 luphawu lwaseMelika, endaweni ye-1Cr18Ni9. Izinyithi ezingenazingcingo zaseAustenitic zibonakaliswa ngamaqondo obushushu otshintsho kwinqanaba eliphezulu kwaye ke zinokusetyenziswa njengeentsimbi ezingamelaniyo nobushushu. Ukuze wenze utshintsho lwesigaba sensimbi esingenasici se-austenitic, kufuneka shushu ngaphezulu kwe-1000 ° C, kwaye kwi-350 ° C, isakhiwo se-metallographic asitshintshi, oko kukuthi, ukusebenza kwesinyithi akuguquki ngokusisiseko. Iya kudumba kuphela ngenxa yobushushu, kodwa ayizukutshintsha kakhulu. Kwiimeko eziqhelekileyo, inokungahoywa. Ngesi sizathu, intsimbi engatyiwa engama-202 inokumelana neqondo lobushushu eliphezulu. Yiyo le ntsebenzo, i-202 yentsimbi engenasici isetyenziswa kakhulu ekuhombiseni uyilo, ubunjineli boomasipala, oogada bendlela, amaziko ehotele, iivenkile ezinkulu, iindawo zokubamba ngeglasi, amaziko oluntu kunye nezinye iindawo. Yenziwe ngobuchule obuphezulu bokwenza izixhobo zombhobho, ezenziwa kukuzenzela kunye nokudibanisa, ziqengqiwe kwaye zenziwe, kwaye zizaliswe ngokhuseleko lwegesi (ngaphakathi nangaphandle kombhobho) ngaphandle kokugcwaliswa kwesinyithi. Indlela yokuwelda yinkqubo ye-TIG kunye nesisombululo esomeleleyo esiku-intanethi sokufunyanwa kwesiphene sangoku.
Ukusuka kwinqanaba lokujonga ibakala, i-202 ingaphezulu kwe-manganese enye kunye ne-nickel engaphezulu kwesithathu. Kwizicelo ezenziwayo, ngokwe-utility, i-202 ingcono kancinci kune-201, kodwa uninzi lwabasebenzisi bemakethi bayayamkela ityhubhu yezinto zokuhombisa ezingama-201 ngexabiso elisezantsi kunye nokusetyenziswa okufanelekileyo okufana no-202. ukumelana noomatshini kunye nokumelana kubhetele kancinci, kodwa ngokungqongqo, umahluko wentsebenzo phakathi kweentsimbi ezimbini ezingenasinxibo awubalulekanga, ngakumbi kuxinzelelo lokumelana nomhlwa.
Kukho kuphela imibala eyahlukeneyo kumphezulu we-201 kunye ne-202 yentsimbi engenasici, kodwa kusekho umahluko omkhulu kwimeko eyiyo. Ngokungeniswa kweli nqaku, sinethemba lokunceda abasebenzisi beshishini ukuba bafumane izinto ezingenasici ezifanelekileyo kwiimveliso zabo xa kuthengwa iimveliso, kwaye kuphuculwe ukusebenza kwesicelo. , ukugcina iindleko ezikhoyo
Egqithileyo Precision coil insimbi
Okulandelayo: 304 304L eshushu liqengqiwe ipleyiti steel stainless
Iplate eshushu engenazingcingo eshushu